I-FAQs-Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Ngaba ungumvelisi ohamba ngokuthe ngqo kunye nomthengisi ovela eTshayina?
Ewe sinjalo. Singumenzi we-OEM kunye ne-ODM yalapha ekhaya, sinomzi-mveliso wethu kunye neSebe lezoRhwebo lwaManye amazwe.
Ihlala phi ifektri yakho?
Umzi-mveliso wethu ubeka kwisixeko sase-Yixing, kwiPhondo lase Jiangsu, e China. Kuthatha malunga ne-2hours ngesitimela esinesantya ukusuka eShanghai kwiSikhululo senqwelo moya ukuya kwisixeko sethu. Wamkelekile ukuba undityelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha.
Ndiyithenga njani impahla yakho?
Nceda usithumele imibuzo yakho (isikhombisi, imifanekiso, isicelo) nge-Alibaba, i-imeyile, Wechat us. Kananjalo ungasinika umnxeba ngokuthe ngqo malunga neemfuno zakho, siya kukuphendula ASAP.
Lide kangakanani ixesha lokukhokela?
Kuthatha malunga neentsuku ezingama-25 ukuya kwengama-30 emva kokuba isampulu iqinisekisiwe kwaye idiphozithi ifunyenwe. Ukuba ufuna iimpahla ngokungxamisekileyo, nceda usixelele, kwaye singazama konke okusemandleni ethu ukukunika kuqala.
Ndingayifumana njani isampulu kuwe?
Ukuba sinesitokhwe kwiimodeli ozifunayo, singakuthumela isampula yasimahla ngqo. Kodwa ukuba ufuna UQINISEKISO, iindleko zesampulu ziya kuhlawulelwa. Kwaye zombini iindlela, umthwalo kufuneka ihlawulwe nguwe. Iisampulu zingathunyelwa nge-Fedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Kwimveliso yokuvelisa ngobuninzi, kuya kufuneka uhlawule i-30% yediphozithi ngaphambi kokuveliswa kunye ne-70% yebhaldi yokuthumela. Indlela eqhelekileyo yeT / T kwangaphambili. Ibhalansi nge-L / C, i-DP ekuboneni nayo iyamkelwa.
Ndingalujonga uhlobo lweempahla ngaphambi kokuziswa?
Ewe, wena okanye oogxa bakho enkampani, okanye umntu wesithathu wamkelekile kumzi-mveliso wethu ukuba enze uhlolo ngaphambi kokusiwa.
Zithunyelwa njani kum iimpahla?
Ngobuncinci obuncinci, sicebisa ukuhambisa ngekhuriya, njengeFedex, UPS, DHL, ect.
Ngobuninzi obukhulu, sicebisa ukuhambisa ngenqanawa elwandle. Sinokuthumela iimpahla kwi-Shipward Forwarder yakho eyabelweyo (ixabiso le-FOB). Okanye ukuba awunayo, singakukhuphelela kwixabiso leCIF.